I-M1w • I-Strawr Camera Straps
ikhaya / I-M1 Series Series Straps / M1w
ikaliwe 4.88 Kwi-5 esekelwe kuyo 16 amanqaku umthengi
Ukufuna i-antidote ye-straps enamandla kunye ne-bulky (inzulu, senza entanyeni iimbambo ezincinane iipakethe), sibeka izinto zethu ekudaleni i-strap ye-crystal-out-no-non-nonense I-M1w I-Strap Wrist Wallless.
Ukulinganisa-malunga nekota yesithathu, i-NX-M1w i-nano-size yenza i-khamera ekhohlakeleyo efana ne-Fujifilm X100, XE, i-Ricoh GR, i-Canon PowerShot G okanye i-Olympus PEN. Kwakulungile njengendlela yokukhusela ikhamera yakho enkulu, nayiphi na ixesha ukhetha ukudubula ngaphandle kwentambo yentamo.
yethu I-M1-Series I-Quick-Release Camera Straps Zonke zisebenzisa ikhonkco elinye, ukuze ubentshintshe ngokungasebenziyo… isiqaqa esontambo (okanye umva) kwimizuzwana.
Ngokwesiqhelo iinqanawa ngeentsuku ezi-1-2 zeshishini.
Akunzima kakhulu. Akunzima kakhulu.
Ukufumana isambatho sesandla esingenayo ngcikivo enkulu ngekhamera yakho engenakubukrini ayikho umsebenzi olula. I-M1w isebenzisa i-1 / 2 "ebanzi (12.7mm) ye-nylon-style-style ye-nylon ehambayo ehambisa iikhamera ezincinci, kwaye ikhusela ikhamera yakho enkulu kumanxuwa angalindelekanga-ngaphandle kokuba uzive ufunwa ngesandla.
Ukulula ukugqoka, ulungiso & Susa
Akukho nto yokulwa kunye nabaguquleli abanenkani ... Eyona nto kulula ukuyifakraza, kodwa sinomdla okwaneleyo ukuba sihlale kwindawo de nina ukuhambisa. "Yilungise kwaye uyibale" okanye uyifake encinci encinci nje xa ikhona - naluphi na ukhetha.
Uhlalisa zonke iiMpahla zoLuntu
Ngokungafani neengqayi zesikhonkwane ezisetyenziselwa i-"lasso", iyakwenza ixesha elide xa liphakanyiswe iinqununu ezincinci kwaye lifutshane xa likhulu kwiimbumba ezinkulu (ezichanekileyo ngokuchasene yinto efanelekileyo), yethu ihlale ihlala ubude obufanayo. Yaye ukuba unezandla ezinkulu, ungasusa i-adjuster ngokupheleleyo.
UkuKhanya, Okuqinileyo nokuKwakha ukugcina eMelika
Izinto ezisetyenziselwa ukwenza i-M1w zifana noko uza kufumana kwi-gear ye-gear yokujikeleza, apho ukulinganiswa kwesisindo kuya kubaluleke (nantsi vavanyo lwamandla), kwaye ukubonakaliswa kwimiba ayikho into enkulu.
I-M1w yakhiwe ngokwemigangatho ephakamileyo ekhohlakeleyo kwisitolo sethu sase-US, kwizinto ezisetyenziswayo zangaphandle kunye nezinto ezifakiwe.
I-M1w + M1a = I-Camera ye-Strap Strap Bliss
Hlanganisa i-M1w yesikhonkwane somkhonto kunye M1a intambo yentamo, kwaye unayo i-duo enamandla ekulungele nayiphi na imeko, kunye neepakethe ezincinci. Ngenxa yokuba basebenzisa okufanayo OpTech Mini QD Loop isixhobo, ungatshintsha Imizuzwana.
Amakhamera amaninzi, i-Strap One
Ukuthenga okongeziweyo Imizuzu ye-QD Loops ukuhambisa iqhosha lakho ngaphandle kwekhamera ukuya kwikhamera.
Ikhamera engenakusolekayo, Ikhamera encinci engabonakaliyo, Ikhamera ye-Four-Third Ikhamera, iCompact Camera, Ikhamera yePoint & Shoot, iCompact DSLR, i-35mm SLR, i-35mm Rangefinder
I-2.5lbs (1.13kg) okanye ngaphantsi
Ukuvula ukulungiswa ku-7 "(18.4cm)
Sale! $74.50 $67.50 Khetha Khetha
UPatrick La Roque ungumfoto wezithombe, umbhali, isithethi kunye nelungu leKage Collective. Ungumalathisi obalaseleyo wokubhaliweyo, osebenzayo unokulinganisa ngokukhawuleza okanye ukuthukuthela, ukufudumala okanye ukuzimela. Nantsi into encinci yintoni uPatrick acinga ngayo nge-M1a ne-M1w yakhe: "... Ngokuyinene, ezi zizinto ezingabonakaliyo okanye ukukhazimula, ezingabambi ngqalelo [...]
I-ThePhoblographer.com ishicilela itoni yezinto eziphathekayo kubalingisi beefoto abazama ukuphakamisa ubugcisa babo, okanye baqhubele phambili kunye neyona ndlela yakutsha kunye neyona ndlela intsha yokufota. Ukuthetha ngokutsha, sivuywe kakhulu ukuba baye bakhetha ukuthetha malunga ne-M1w ye-Mirrorless Wrist Strap yethu entsha. Funda inqaku elipheleleyo apha.
Faka i-Simplr Split Rings, okanye i-Lug Mount F1
* Ukuba usanda kufaka iInclr Split Rings, kungekhona i-F1 yekhamera yekhamera, unganqumla ngqo kwi-1: 07 kule vidiyo. I-F1 yakho entsha iya kuba mnandi kakhulu xa usebenzisa "ukungena ngaphakathi" ngaphambi kokuyifaka kwikhamera yakho. Lungisa umgca ukusuka kumncinci ukuya kubude obude malunga namaxesha angamashumi amabini, ngokubamba [...]
Ngaphandle kokuba uyi-100% ngokuqinisekileyo ukuba ikhamera yakho ineefayile ezigudileyo, kungcono ukuba uqhoboshele ii-Mini QD Loops ngemigca eqhekezayo. Ngapha koko, sicebisa ukuba usebenzise eyethu, njengoko yenzelwe ngokukodwa ukuba isebenze kakuhle ngemitya yokuloba intambo (ibhetele kakhulu kunalenxantathu). 1. Cofa intambo yokujikeleza kwindandatho yokuqhekeza. 2. […]
Phambi kokunamathisela iiLops QD zeLaptop ngqo kwi-strap lugs, funda esi sithuba sibalulekileyo: I-Strap Lug Insert: Zeziphi kwaye kutheni kufuneka ndizikhathalele? Ngaphandle kokuba uyi-100% ngokuqinisekileyo ukuba ikhamera yakho ineentsimbi ezigudileyo, kungcono ukuba uqhoboshele ii-Mini QD Loops ngemigca eqhekezayo, njengoko kuchaziwe apha. 1. Cofa intambo yokuhombisa ngentambo […]
Izinto ezizofakwa kuzo izigqoko zengxube zengxube zintsimbi "zengxowanxu" zomeleleyo zisezintanjeni zangaphakathi. Ziye zenzelwe ukunciphisa ingubo yensimbi yensimbi ebangelwayo xa insimbi eqhekezayo idibanisa iindandatho zixubha ngokubhekisele kwiingxobo zensimbi ezingenanto. Ezinye iikhamera zinezigqoko zentambo kwaye ezinye aziyi. Iikhamera zeFijifilm ziyaziwayo ngokuba zibandakanya iingxube zeengxowa zentambo, kunye nazo zonke iikhamera ze-Fuji ezibandakanya [...]
Ukuba unekhamera yeFijifilm, kwaye ungathanda ukufakela i-Mini QD Loops ™ ngqo kwikhamera yakho, unokukwazi ukukhenxisa ingxube yakho yokubamba iqhosha ukuze ubonakalise iphuzu elincinci lokunamathisela. Nceda uqaphele ukuba xa ukhangela ingxowa yesikhumba ngexesha le nkqubo, unokuyenza ibe lula ngakumbi kunokuba [...]
4.88 aphume iinkwenkwezi 5
Umsebenzi ngaphandle kokuba neflash
redsim - Aprili 8, 2020
Ukukhanya, yomelele, kwaye ayibonakali. Ndinomtya wesikhumba endikukhethayo, oku kuyakuba yinto engaphezulu kwingxowa yam yesibini yekhamera.
Isandi seRifat - Septemba 16, 2019
Lo mtya liqabane elifanelekileyo likaRicoh GR III. Ayisiyonto enkulu okanye i-bulky, kodwa eyona indibaniselwano yesayizi kunye nentuthuzelo.
Jeff B - Februwari 8, 2019
Uthande umxube wekhamera, uphelele kum. Ndiyabuyela ngapha nangapha phakathi kwesandla kunye nentambo yentamo kuxhomekeke kwikiti yam.
Paula Simson - Februwari 1, 2019
Kufunyenwe kwaye kusetyenziswe intambo yam M1 kunye nentambo yesandla kwaye andinakuvuya ngakumbi. Umkhonto wesikhonkco ulungele ukuhamba ngeenxa zonke, ulungile kwaye ulula kodwa uzive ukhululekile kakhulu. Le nkqubo yenze i-Fuji XT3 yam ilunge ngakumbi kwaye isebenze ukuyisebenzisa. Imveliso emikhulu, ixabiso elikhulu, inkonzo enkulu yamakhasimende.
RyanMc - January 9, 2019
Ngoku ndiyi-M1a kunye ne-M1w! Bobabini zikhulu! Ukuba ndiyazi ukuba ndiza kuhamba ngexesha elide kodwa ndifuna ukuba ikhamera yam isebenze, ndiza kufakela i-M1a kwisiqeshana. Ukuba ndiphela nje kwaye malunga nexesha elincinane, ndiyicoca kwi-M1w. Yiyo into enhle malunga ne-Simplr system!
Zathenge zombini iM1a & M1w. Thandani bobabini!
Neal Westergaard - Aprili 20, 2018
Ukuba kukho "iqela leCamper Strap Unonymous", ndiza kujoyina. Kuyinto ehlazo ukucinga ngayo yonke intamo kunye nentambo yesandla endiyithengile ngaphezu kweminyaka. Emva kokuthenga i-M1a kunye ne-M1w, ndiyakholwa ukuba ekugqibeleni ndifumene inhlanganisela epheleleyo. Ngamanye amaxesha ndifuna / ndifuna umlenze wentamo, ngamanye amaxesha ndifuna / ndifuna i-strap strap, kunye nokukhawuleza ukuxhuma izicwangciso kwenza kube lula ukutshintsha ukusuka kwelinye ukuya kwelinye kwi-Fujifilm X100F. Okulula, kulula ukulungelelanisa, ukhululekile. Yintoni enye enokuyibangela umntu ukuba ayifunde entanyeni yentambo kunye nomxube wesikhonkwane somlenze. Nangona ezi zijoliswe kwiikhamera ezingenakubukrabhu, ndicinga ukuba usebenzise enye ifilimu encinci ye-SLRs (iMololta XD-11, i-Nikon FM3a) kwaye andiyikuboni ukuba kutheni engayi kusebenza kwi-Canon 6D yam. Unomcimbi omncinci ngenye yezonxibelelwano, u-Simplr waphendula ngokukhawuleza waza wanyamekela ingxaki. Khuthaza kakhulu. Ngoku ukuba ndiyakwazi nje ukuba ndizenze ntoni nazo zonke ezinye izibambo ezisezantsi.
Stelios Kirtselis - Aprili 17, 2018
Ndithenge zombini izibambo (M1a & M1w) kwaye nithande bobabini. Ukukhanya, kulula ukunamathela / ukususa kwaye kubonakala kukuhle.
jasonkent - Aprili 7, 2018
Kutsha nje kuthengwa i-M1a kunye ne-M1w, kwaye ndimba zombini. Ndandisoloko ndisebenzisa ukuba ne-vendetta enje ngeprojekthi yeplastiki kwiingxowa kunye neengqayi, kodwa ngokuqinisekileyo ndiqale ukujika ikona, njengoko ndiyithandayo i-straps yona yongeza ubunzima bobunzima kwi-setup yakho (kwaye ii-loops mini ze-QD zikhulu), kodwa ngaphezu kokukwazi ukuxhasa ikhamera yakho.
Ugur Gundogmus - Februwari 15, 2018
Ndithenge ii-Simplr straps ezimbalwa kwiiveki ezidlulileyo (M1a & M1w) kwaye ndiya kwenza oku mfutshane: Baya kukhanya kwaye yiloo nto ndiyifunayo. Ikhamera yam eyintloko ngu Fujifilm X-T2 kwaye ezi ntambo zilungele kakuhle. Ndicinga ukuthenga intambo yesandla yam Rico GRii ngoku.
kevin - January 29, 2018
Yithande into yokuba ndingayisebenzisa le nxalenye yenkqubo kwaye ndenze isigqibo sokuba ngaba ndifuna ikhamera epheleleyo yekhamera okanye intambo yesandla kwi-fly. Ungayithandi into yokuba ukubethelwa kwintambo yesandla kunomncinci kakhulu, kunokukhetha into encinane.
Simon G - January 25, 2018
Andiyena umqhubi weebhanki zekhamera, kodwa ke ndafumana i-M1w i-Wrist String Wrist Strap. Yenziwe kakuhle, kulula ukuyisebenzisa, kwaye igqibelele yam ikhamera yakwa-Sony.
michael Kennedy - January 19, 2018
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndibe ngumntu ongenamahloni uRicoh GR II.
Ikhamera iyamangalisa - kodwa ukuhamba ngasese kwizitrato zesidolophu esikhulu njengomfanekiso wezithombe zokuzilibazisa, i-sturdy ingaba i-strapist ye-wrist strap iyalungelelanisa, enye ayinayo i-bulky kwaye iphezulu.
I-M1w isalathisi sesandla esingenasiphatho esingenasiphatho sikhonza njengendlela encedisayo ekuhambeni kweendlela ezingenasicaciso seRicoh GR II. Kwaye ... inyaniso yokuba umgca unomsebenzi olula ukuwukhusela ngokwenene ukhathalela idibanti.
Ngelinye igama, umxube "uphelele" kunye neenkwenkwezi ezintlanu kuyo yonke indlela.
PF BENTLEY - January 2, 2018
I-Lightweight, i-modular ngokupheleleyo kwaye ishintshaniswa kunye ne-Simplr M1A i-strap straps, i-M1w ayithengi nge-no-brainer kwezo zihlandlo ofuna ukuhamba kakhulu. Ndiyisebenzisa kwi-Sony A6300 yam ukuthungulwa kwesitalato. Ezinye iisethi zokudibanisa isikhonkwane zine-buckle endleleni apho isandla sakho sijikeleza ikhamera kwaye siyingozi yokuthatha kunye nokucima, oku kuyindlela enhle ... into elula.
Jarvis Chen - January 2, 2018
Umkhonto wam intanda ozithandayo.
I-M1w iyintsimbi yam intandokazi yam yonke into evela kwi-Ricoh GR II, i-Sony RX100 V, kwi-Sony A6500, kunye ne-A7RII.
Iintlobo ezibalulekileyo zezinto ezintathu zesikhonkwane somkhonto zilula, ukwenziwa ngokwezifiso kunye nokuguquguquka. Kukho iinketho ezininzi ezinobumba kwiimarike ezikwazi ukwanelisa omnye okanye ezimbini kwabathathu, kodwa akuzona zonke ngexesha elinye. Ngokuqhelekileyo, iqhosha liyakuziva likhuselekile, kodwa lingaxhamli, okanye liguquguquke, kodwa likhuselekile; I-M1w yenza konke.
Ubuncwane bunzima kakhulu ukukhusela nokudibanisa ngokufanelekileyo, unokwenza ubeke umgca wakho wokubamba kwaye uya kuhlala apho ude ufune ukwenza i-loop ye-loop or looser. I-nylon yayo ye-nylon iguquguqukayo, ingena manzi, kwaye ilula ukuhambisa izibonda zakho ngokuzenzekelayo; uphelele ukufotowa kweetrato, apho kufuneka ube yinto ephosakeleyo kunye nokubeka kwakho.
Enye into ebalulekileyo yoyilo kukuba unako ukukhawuleza ukunqumla umgca kwikhamera uze uyibeke phantsi okanye ubeke ikhamera yakho komnye umntu; yonke into iyimodeli efanelekileyo kwaye isebenza kakuhle kunye ne-Simplr ehlombe. Unako ukufumana iingcambu ezimbini zokuxhuma ngokukhawuleza kwikhamera yakho kumgca wegxala kwaye unako ukukhawuleza uthabathe amacangca amabini, fakela kwisikhongo sesandla kwisandla sakho esifunekileyo uze uhambe. Ngenxa yokuba indawo yokuxhamla kwikhamera yinto enqabileyo, awusoze wakhathazeka ngokukhangela ikhamera yakho ngenxa yeetopski zetsimbi okanye ezinye izinamathiselo ezithi ezinye, i-bulkier, i-straps straps. Unako ukususa imithwalo yakho yensimbi (isangqa okanye unxantathu) ukusuka kwikhamera yakho kwaye unamathisele umgca wesikhonkco ngqo kwikhamera ukuze usebenze kancinci.
Njengebhonasi i-attachment ye-loop iya kufaka nantoni na kwikhamera epheleleyo yekhamera kwi-compact kamera.
Ngokubanzi, le nto yam intambo yam intandokazi kwaye ndiya kuthenga kakhulu mna kunye nezipho zamabhinqa.
Ndiyakhuthaza kakhulu i-M1a umthwalo / intamo!
Charlene - January 1, 2018
Isithembiso se-Simplr kunye neenkampu eziqhelekileyo zekhamera zifikelela kwintsimbi. Ndiye ndazama iinamba zomnxeba kwiminyaka yonke, ukudubula rhoqo kwidolophini, kwaye akukho namnye kubo owayehlala ngokufanelekileyo, okanye aphelile, okanye ehamba ngendlela. Ndisebenzise umgca wesikhonkwane kunye ne-Fujifilm X-E3 kunye neekhamera ze-X-Pro2 kunye ne-Fujinon prime lenses kumzimba ngamnye, kwaye isebenza ukuphathwa: ngokukhawuleza, ngaphandle kokubambisana, kungenza ndikwazi ukwenza umsebenzi wam ngaphandle kwe-hitch. Oobhontsi phezulu!